ပွညျသူတှပွေုလုပျခဲ့တဲ့ အသံတိတျသပိတျနဲ့ ပကျသကျ လို့ ဝဖေနျလာခဲ့တဲ့ ခရိုနီမငျးသားလေး အောငျရဲလငျး – XB Media & News
ပွညျသူတှပွေုလုပျခဲ့တဲ့ အသံတိတျသပိတျနဲ့ ပကျသကျလို့ ဝဖေနျလာခဲ့တဲ့ ခရိုနီမငျးသားလေး အောငျရဲလငျး
မငျးသားတှထေဲမှာ အရပျ ၆ ပကြေျောနဲ့ six pack နဲ့body ခပျမိုကျမိုကျကောငျလေးတဈယောကျဖွဈ Model လောကရော သရုပျဆောငျပိုငျးမှာနာမညျကွီးအောငျမွငျနတေဲ့ အောငျရဲလငျးဟာ ဟိုးအရငျ က ကိုနိုငျးနိုငျးရဲ့ ရုပျရှငျတှမှောဇာတျပို့ဇာတျရံ
နရောမှာ မွငျ့မိုရျ ဆိုတဲ့နာမညျနဲ့ အခြိနျကွာမွငျ့စှာ သရုပျဆောငျခဲ့သူပါ။အနုပညာလမျးကွောငျးပျေါမှာအောငျမွငျစှာ လြှောကျလှမျး လာပွီးနောကျပိုငျးမှာတော့ ခရိုနီကွိုကျမငျးသားလေးတဈယောကျဖွဈလာပါတော့တယျ။ အောငျရဲလငျးခဈြသူအဖွဈရှေး
လိုကျတဲ့ သူတှကေတော့ ခရိုနီတှထေဲပဲ တဈယောကျပွီးတဈယောကျဖွဈလို့နတောကွောငျ့ ခုလကျရှိမွနျမာနိုငျငံရဲ့ ဖွဈနတေဲ့နိုငျငံရေး အနအေထားမှာ အနုပညာရှငျတျောတျောမြားမြားကတော့ ပွညျသူတှနေဲ့တဈသားထဲကလြို့ နခေဲ့ပမေဲ့ မငျးသားခြော
အောငျရဲလငျးကတော့ တိတျဆိတျနခေဲ့တဲ့အကွောငျးရာတှကေို ဖွရှေငျးလာခဲ့ပါသေးတယျ။ သူ့ရဲ့ Instagram မှာတော့ အခဈြရေး နဲ့ ပတျသကျပွီးကောငျမလေး တှနေဲ့ တှဲလိုကျ ပွတျလိုကျ ဖီးလိုကျ ဘီယာလေး ခလြိုကျနဲ့ အလုပျမြား နခေဲ့တာပါနျော… မနကေ့
ပွညျသူတှပွေုလုပျခဲ့တဲ့ အသံတိတျသပိတျနဲ့ပကျသကျလို့ အောငျရဲလငျး က “တနကေုနျအပွငျမထှကျပဲနတေယျဆိုတာ တကယျတော့ ကို့ကိုယျ တရကျ အခြုပျခနျးထဲခလြိုကျတာပါပဲ ဘယျမ မထှကျပဲနတေော့ဘာဖွဈလဲ ဘာမဖွဈမလာပါဘူး စားခငျြတာမစားရ
လညခြငွတြာမလညြ ရတာပဲ ရာပေါ့” ဆိုပှီး ရေးသားလာခဲ့တဲ့အပေါမြှာ . အောငမြှငမြှုထြိပဆြုံးရောကနြပှေီးမှ ဒီလိုစကားမပှောသ ငြ့ဘူးဆိုပှီး ပရိသတတြှကှေားမှာ ဝဖနေမြှုမှငြ့တကနြပေါတယနြော..
Fans Myay Ni Lan ပရိသတျကွီးရော အမွငျလေးကို ရေးပေးသှားကွပါအုံးနျော…
Source: Aung -Ye-Lin
ပြည်သူတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အသံတိတ်သပိတ်နဲ့ ပက်သက်လို့ ဝေဖန်လာခဲ့တဲ့ ခရိုနီမင်းသားလေး အောင်ရဲလင်း
မင်းသားတွေထဲမှာ အရပ် ၆ ပေကျော်နဲ့ six pack နဲ့body ခပ်မိုက်မိုက်ကောင်လေးတစ်ယောက်ဖြစ် Model လောကရော သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာနာမည်ကြီးအောင်မြင်နေတဲ့ အောင်ရဲလင်းဟာ ဟိုးအရင် က ကိုနိုင်းနိုင်းရဲ့ ရုပ်ရှင်တွေမှာဇာတ်ပို့ဇာတ်ရံ
နေရာမှာ မြင့်မိုရ် ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ အချိန်ကြာမြင့်စွာ သရုပ်ဆောင်ခဲ့သူပါ။အနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာေ အာင်မြင်စွာ လျှောက်လှမ်း လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ ခရိုနီကြိုက်မင်းသားလေးတစ်ယောက်ဖြစ်လာပါတော့တယ်။ အောင်ရဲလင်းချစ်သူအဖြစ်ရွေး
လိုက်တဲ့ သူတွေကတော့ ခရိုနီတွေထဲပဲ တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက်ဖြစ်လို့နေတာကြောင့် ခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံရေး အနေအထားမှာ အနုပညာရှင်တော်တော်များများကတော့ ပြည်သူတွေနဲ့တစ်သားထဲကျလို့ နေခဲ့ပေမဲ့ မင်းသားချော
အောင်ရဲလင်းကတော့ တိတ်ဆိတ်နေခဲ့တဲ့အကြောင်းရာတွေကို ဖြေရှင်းလာခဲ့ပါသေးတယ်။ သူ့ရဲ့ Instagram မှာတော့ အချစ်ရေး နဲ့ ပတ်သက်ပြီးကောင်မလေး တွေနဲ့ တွဲလိုက် ပြတ်လိုက် ဖီးလိုက် ဘီယာလေး ချလိုက်နဲ့ အလုပ်များ နေခဲ့တာပါနော်… မနေ့က
ပြည်သူတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အသံတိတ်သပိတ်နဲ့ပက်သက်လို့ အောင်ရဲလင်း က “တနေကုန်အပြင်မထွက်ပဲနေတယ်ဆိုတာ တကယ်တော့ ကို့ကိုယ် တရက် အချုပ်ခန်းထဲချလိုက်တာပါပဲ ဘယ်မ မထွက်ပဲနေတော့ဘာဖြစ်လဲ ဘာမဖြစ်မလာပါဘူး စားချင်တာမစားရ
လညျခငျြတာမလညျ ရတာပဲ ရာပေါ့” ဆိုပွီး ရေးသားလာခဲ့တဲ့အပျေါမှာ . အောငျမွငျမှုထျိပျဆုံးရောကျနပွေီးမှ ဒီလိုစကားမေ ပွာသ ငျ့ဘူးဆိုပွီး ပရိသတျတှကွေားမှာ ဝဖေနျမှုမွငျ့တကျနပေါတယျနျော..
Fans Myay Ni Lan ပရိသတ်ကြီးရော အမြင်လေးကို ရေးပေးသွားကြပါအုံးနော်…